Hetauda News - नारायणी सहकारीको २२ औं साधारण–सभा सम्पन्न ।
हेटौंडा, आश्विन २० । नारायणी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आज हेटौंडामा आफ्नो २२ औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । करीब १५ सय सदस्य रहेको सो सहकारीको बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अब सहकारी संस्थाहरु एकत्रित हुँदै आफ्ना पूँजीलाई उद्योग कलकारखानामा लगानी गरी समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्नु पर्ने समय आईसकेको बताएका छन् । उनले एउटा सहकारीमा सदस्य भैसकेको व्यक्ति सोही प्रकृतिको अर्को सहकारीमा पनि सदस्य हुनु भन्दा एउटै सहकारीमा आबद्ध भएर संस्थालाई मजबुत बनाउनु पर्ने सुझाब पनि दिएका छन् ।
साधारण सभामा वडा नम्बर ९ की सबैभन्दा जेष्ठ नागरिक १ सय बर्षकी महाकालीदेवी भुजेललाई सम्मान सहित सहकारीमा १५ बर्ष देखि निरन्तर आवद्ध ७५ बर्ष उमेर पार गरिसकेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ सयका दरले एकमुष्ठ एक बर्षको ६ हजार रुपैयाँ रकम सहित सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहकारीको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशीलताका लागि बद्री लम्साल, अधिक रक्तदाताका रुपमा नहकुल अधिकारी पनि सम्मानित भएका छन् ।
शेयर पुँजी ३ करोड भन्दा बढी रहेको यस सहकारीले गत आषाढ मसान्त सम्म रु. १० करोड ८५ लाख बचत गरेको छ भने रु. १२ करोड भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको छ । सहकारीले निर्माण सामग्रीहरुको संस्थागत व्यवसाय समेत गरिरहेको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सभापति रघुनाथ खुलाल, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राई, पूर्व सभासद अनन्त पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो । साधारण सभा संस्थाका अध्यक्ष रामहरि न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।